Ihe ukwu nile nwere mmalite ha pere mpe. - Peter Senge - Kwuru Pedia
Ihe ukwu nile nwere mmalite ha pere mpe. - Peter Senge
Ka anyị na-etolite, anyị niile nwere ebumnuche dị iche iche na ndụ. Ọ na-amalite n'ihi mmụọ dị iche iche anyị na-ahụ gburugburu anyị na ahụmịhe dị iche iche anyị nwere ka ndụ na-aga n'ihu. Iji mezuo nrọ anyị, anyị na-echekarị na anyị chọrọ ọtụtụ akụ nke anyị enweghị.
Anyị n’enwekwa oge ụfọdụ, nwee obi abụọ n ’echiche onwe anyị ezughi oke. N'oge a, anyị kwesịrị ịkwụsị ma chee echiche. O di nkpa ikwere na onwe gi. Anyị ga-akwụrịrị onwe anyị ụgwọ, ọbụlagodi obere ọganiihu.
Anyị kwesịrị ịnwe obi ike site na obere ihe ịga nke ọma ma wulite ntụkwasị obi na ha. Ahụmahụ dị iche iche na-egosi anyị akụkụ dị iche iche na ndụ. Ọ na - akuziri anyi ihe mmụta di iche iche na enyere anyi aka ito. Yabụ, anyị kwesịrị ịnabata obere ihe ma wulitekwa ya. Ọ na-enye aka na-aghọrọ mmụọ anyị chọrọ.
Mgbe ụfọdụ, anyị na-eche na ụtụ anyị na-akpata ihe ka ukwuu adịghị mkpa. Mana anyị kwesịrị ịmara na obere nzọụkwụ ọ bụla dị mkpa. Anyị na-eme ihe dịka mmetụta na ndị ọzọ nwekwara ike inye aka. Mmetụta ụdọ a na-eme ka ihe buru ibu ma nwee nnukwu mmetụta.
Yabụ, anyị ga ekwenye n'ike anyị ma zere ịmalite ihe ejiri ezi ebumnuche mee. Ọ bụrụgodi na anyị na-agba mgba ma ghara ịhụ ọkụ na njedebe nke ọwara, anyị kwesịrị ijide njedebe anyị.
Ihe nwere ike inwe uche ugbu a, ga-enwe uche ma emechaa ka anyị na echetara anyị ọhụụ ncheta na-emezu nrọ anyị ma emechaa.
Akwa Quotes Maka umuaka
Echiche Dị Mkpa Na Ọganiihu
Nnukwu Ọrụ Quotes
Ntuziaka banyere mbido ọhụụ
Ntuziaka banyere mbido ọhụụ na mgbanwe
Obere echiche nke ụbọchị
Quotes dịkarịsịrị nta